December | 2016 | Indrenionline.com | Page 20
Monthly Archives: १० पुष २०७३, आईतवार ०७:२६
आफ्नै जवान छोरीमाथि बलात्कार
कोहलपुर । नौवस्ता–२ का ४५ वर्षीय एक ब्यक्तिले श्रीमती माइत गएको मौका पारी आफ्नै जवान अशक्त छोरीमाथि बलात्कार गरेका छन् । ४५ वर्षीय ती बाबुले १९ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गरेका हुन् । पत्नी दैलेख माइतमा गएको बेला ती व्यक्तिले मदिरा सेवन गरी छोरीमाथि बलात्कार गरेको उजुरी परेको र बाबुले स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले बिहीबार छोरीबाटै बलात्कार भएको ...
कविता : मेरो प्यारो मान्छे !
मेरो प्यारो मान्छे ! तिमीलाई जन्म दिनको अनेकन शुभकामना तिम्रो जन्मदिन प्रिय ! आज तिम्रो जन्मदिन यो न चिसो न तातो कपास जस्तो नरम मुलायम याम तिम्रै राज त हो। आजको दिन यो चौडा सड़क र अफ्ठेरो गोरेटोको कुरा नगरौं किनकी तिमी आफैं सबैभन्दा लामो बाटो हौ। यी प्रदेश र अव्यवस्थित भूगोलको पनि कुरा नगरौं जब तिमी आफैं अब्बल व्यवस्था ...
क्यान्सर पिडित खत्रीलाई सहयोग
बसन्त परियार,तुलसीपुर ९ पुस । क्यान्सर पिडित तुलसीपुर १ राणागाउ निवासि विर बहादुर खत्री सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ । बिभिन्न सञ्चार माध्यामबाट समाचार प्रकाशित भएपछि उनलाई शनिबार मोडल एपी खड्काले ६ हजार पाँच सय रुपैयाा आर्थिक सहयोग गरेका हुन् । राप्ती भेरी विकास बैंक तुलसीपुर शाखाका सहायक मेनेजर समेत रहेका केसीले पिडित खत्रीकै निबासमा पुगी सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन् ...
सिचाई वोरिङ सञ्चालन गर्न माग
तुलसीपुर ९ पुस । गोल्टाकुरी ८ को वडा भेला शनिबार भएको छ । वडा नागरिक मञ्चका संयोजक पवित्रा खत्रीको अध्यक्षता तथा सिड संस्थाका विनोद चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा भेला भएको हो । भेलाले वडामा रहेको सिचाई जिटि फोर डिग वोरिङ सञ्चालनमा नआउदा स्थानियलाई समस्या निम्तिएको ठहर गरेको छ । भेलामा सहभागि भएका उपभोक्ताले खेतको विचमा सिचाई वोरिङ भएको तर अध्यक्षले कुनै ...
सात कार्यकर्ता राप्रपामा प्रबेश
प्रकाश डाँगी/ गोलटाकुरी ९ पुस । राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकीकरण संगै दाङ राप्रपाले आफ्नो संगठन बिस्तारलाई तीब्रता दिन थालेको छ । केन्द्र ,जिल्ला र क्षेत्र एकीकरण पछि राप्रपाले गाँउ एकीकरण अभियान सुरु भएको छ । त्यसैको सिलसिला शनिबार दाङको गोल्टाकुरी गाबिस बाट सुरुवात गरिएको सो पार्टीको नेतृत्वले बताएको छ । दाङका जिल्ला स्तरीय नेताहरु सहभागीतामा गोल्टाकुरीमा राप्रपा एकीकरण अभियान ...
बिजौरीमा महोत्सब हुने
बिजौरी ९ पुस । बिजौरीमा कृषि पर्यटन पबद्धन तथा संस्कृतिक महोत्सब हुने भएको छ । स्थानीय उत्पादनमा हाम्रो प्रोत्साहान, धार्मीक तथा पर्याटकीय स्थल छिल्लीकोटको पहिचान भन्ने नराका साथ विजौरी उद्योग वाणिज्य संघले महोत्सव सञ्चालन गर्ने भएको छ । महोत्सब यहि पुस २० देखी माग १ गते सम्म सञ्चालन हुन लागेको संघका अध्यक्ष मुकेश वलीले जानकारी दिए । महोत्सब सञ्चालनका बिषयमा ...
आईतबार सार्वजनिक विदा
तुलसीपुर ९ पुस । सरकारले ख्रिसमसमा सार्बजनीक बिदा दिने भएको छ । केपी वली नेतृत्वको सरकारले ख्रिसमसको अवसरमा दिँदै आएको विदा कटौति गरेको थियो । विगत देखि दिँदै आएको विदालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका प्रेस सल्लाहकार रामजी दाहालले जानकारी दिए ।
नमस्तेको २४ प्रतिशत बोनश सेयर पारित
आनन्दमोहन नमस्कार घोराही, ९ पुस । घोराहीमा सञ्चालनमा रहेको नमस्ते वित्तीय संस्थाको आज घोराहीमा सम्पन्न दशौंं साधारणसभाले २४ प्रतिशत बोनश सेयर पारित गरेको छ । बोनश सेयर संगै संस्थाको चुक्ता पूँजी चार करोड ६५ लाख पुगेको छ । दाङलाई कार्यक्षेत्र बनाएर दश वर्षअघिदेखि सञ्चालित संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग वर्गको इजाजतपत्र वित्तीय संस्था हो । कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष निर्मल ...
‘त्यतिवेला मलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अफर धेरै आएका हुन्’–प्रचण्ड
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, ९ पुस । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान निर्माणको वेला आफूलाई प्रध राष्ट्रिपति बन्नका लागि धेरै अफरहरु आएको खुलासा गरेका छन् । दाङको घोराहीमा आज प्रेस सेन्टर नेपाल दाङशाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । त्यतिवेला आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा भएको र आफूलाई आएका अफरहरु स्वीकारेको भए संविधान ...
किन घट्यो यसपटक गिठेपानीको मह ?
गोविन्द खड्का घोराही । एक सय ४२ घार माहुरी घोराही ६ गिठेपानीका बालाराम बस्नेतले एकै चोटि घर बारीमा ल्याए । त्यसले जिल्ला माहुरी पालक संघलाई समेत तरंगित बनायो । अनुमति विना कसैले पनि त्यसरी माहुरी भित्रयाउन नपाउने नियम संघले बनाएको थियो । बस्नेतमा भने फाईदा हुने विश्वास थियो । ‘अहिले गिठेपानीमा कसैको माहुरी छैन’ अनुमान बाट फेल खाएका पालक बस्नेत ...